Indawo entle enamagumbi ama-2 kwiNkotshana yokulala ibhlokhi ukusuka elunxwemeni
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguJayne
Relax kwaye uphumle kwigumbi lethu losapho esilithandayo. Kumganyana nje ongephi ukusuka elunxwemeni, yonwabele ukuhlala ongalibalekiyo kugcwele iimuvi ezininzi kunye neencwadi, kunye neyadi enkulu yemisebenzi yangaphandle.
Njengondwendwe lwethu, uqhube ngokupheleleyo kwi-cottage. Yonwabela i-cottage eqaqambileyo nenelanga, okanye uye kuphumla kwiyadi enkulu. Iyadi engaphambili ineendawo ezininzi zokuhlala, kwaye emva kweyadi inegumbi lomlilo. Yitshise i-bbq kwisidlo sangokuhlwa kwi-patio kwaye uyonwabele i-cottage oasis yakho.
I-cottage kukuhamba okufutshane ukusuka kwiilwandle ezininzi, kubandakanya iMilne Park, enendawo yevolleyball kunye nojingi kunye netayara. Kwelinye icala liqula (lamanzi okusela) kunye nolunye ulwandle. Zonwabele iindawo zethu zokutyela ezithandwayo zasekhaya ezifana neJulia's Place kunye neWhytewold Emporium.
Andiyi kuba sesiza ngokuhlala kwakho, kodwa ndihlala ndifikeleleka ngefowuni. Ndihlala edolophini ke xa ufuna into engazange ixoxwe kwangethuba, kuzondithatha iyure ukuya kuwe.